China yakachipa acrylic machira matt pevhu vagadziri uye vanotengesa | Gokai
PVC Furo Bhodhi
PVC yemahara furo bhodhi
pvc celuka furo bhodhi
CO-Yakabuditswa furo bhodhi
WPC furo bhodhi
Ruvara PVC bhodhi
yakajeka acrylic sheet
kukanda acrylic jira
acrylic girazi jira
chena acrylic sheet
mavara acrylic machira
chando acrylic jira
extruded acrylic jira
anopenya acrylic jira
zvakachipa acrylic machira matt pamusoro
WPC sintra epurasitiki machira
acrylic jira bunnings
mwenje diffuser acrylic sheet
yakajeka cast acrylic sheet
sirivheri acrylic girazi jira
1mm PVC yemahara furo jira
15mm Forex pepa
pendi PVC furo jira
yakakwira density CO-yakadzoserwa foamex machira
Kuzvipira kune Hunhu Nemakore gumi 'ruzivo mukudhinda uye kutumira kunze, tinonzwisisa chaizvo izvo izvo vatengi vedu vari kutsvaga. Hunhu ndicho chinhu chekutanga mubhizinesi redu. Hazvina basa nediki diki kana hombe basa, isu tinochengeta yakafanana mhando kudzora maitiro. Tine 4 QC mudonzvo kutarisa mhando yeese odha isati yatumirwa.
Kuwandisa 1.2g / cm3
Ukobvu 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm ...... kusvika 50mm
Ruvara Chero chero ruvara rwakanaka, senge yakajeka, yechando, opal, chena, tsvuku, bhuruu, nhema, nhema uye chena, masikati nehusiku husiku, girazi, nezvimwe. Tinogona zvakare kugadzira
yakagadzirirwa ruvara zvichienderana nezvinodiwa zvako.
Mashoko 100% mhandara Mitsubishi mbishi zvinhu
Hunhu Yedu yakakanda acrylic machira anoenderana neEC / SGS zvitupa
MOQ 2 matani kana imwe huni pallet
Kupisa Kuparadzanisa Kupisa
Thermal Achigadzira Tembiricha
Coefficient of Linear Thermal Kuwedzera
Mvura (24HRS) Kubvisa
1. kuvaka: mahwindo, mahwindo asinganzwisisike uye madhoo, chigaro chemigodhi, matumba enhare, nezvimwe.
2.ad: mwenje mabhokisi, zviratidzo, zviratidzo, kuratidzwa, nezvimwe.
3. chekufambisa: zvitima, mota nedzimwe mota, madhoo nemahwindo
4. Kurapa: vana incubators, akasiyana ekuvhiya ekurapa zvigadzirwa
5. zvinhu zveveruzhinji: zvivakwa zvehutsanana, zvigadzirwa zvemaoko, zvigadzirwa, furemu, tangi, nezvimwe
Yakawedzera acrylic plate 4ft x 8ft acrylic sheet
(Kwete yezve yakakwira tembiricha kucheka uye laser michina)
1.Good mwenje kutapurirana. mavara cas
2.Good ekunze kuramba. Ruvara rwakakandirwa plexiglass jira
3.Can kuumbwa uye reprocessed.
4.Widely mashandisiro, nyore kudhaya uye kupenda.
5.Non-chepfu. Ruvara rwakakandirwa plexiglass jira
6.High michina simba.
7.Chiedza uremu. Ruvara rwakakandirwa plexiglass jira
8.Good kukanganisa simba. Ruvara rwakakandirwa plexiglass jira
9.Good Insulation ficha, inoshandiswa zvakanyanya kune akasiyana magetsi michina.
10.Good yakaoma kupfeka uye kukwenya kuramba
11.Good kemikari kuramba, kukunda kune mamwe akawanda epurasitiki zvinhu.
12.Easy kuchenesa uye kuramba.
Sei iwe sarudza isu?
1.Kuzvipira kune Hunhu Nemakore gumi 'ruzivo mukudhinda uye kutumira kunze, tinonzwisisa chaizvo izvo vatengi vedu vari kutsvaga. Hunhu ndicho chinhu chekutanga mubhizinesi redu. Hazvina basa nediki diki kana hombe basa, isu tinochengeta yakafanana mhando kudzora maitiro. Tine 4 QC mudonzvo kutarisa mhando yeese odha isati yatumirwa.
2.Makwikwi Mutengo Tinogona kurova chero quote ne10% pasi. Isu tinogara tichishanda pamwe nevatengi vedu kubatsira kuhwina bhizinesi rakawanda nemutengo wemakwikwi chaizvo. Sezvo isu tiri kutsvaga venguva refu bhizinesi vatinoshanda navo, kwete chete nguva imwe basa.
3.Fast Dhirivhari Mutengi wese anofanirwa nebasa rinoshanda. Isu tinoshanda maawa makumi maviri nemana nema switch matatu, kune chero anodhinda mukati me1000 mita mita, tinogona kutumira mukati memazuva matatu. Kuhuwandu hukuru, isu tinogara tichiendesa nekukurumidza kupfuura zvinotarisirwa nevatengi vedu.
Q1: Inguva yakareba sei yekugadzira nguva?
A: Iwo anenge mazuva makumi maviri apo isu tinogashira mari.
Q2: Unoita sei kudzora mhando?
A: Tine QC timu inoenderana neTQM, nhanho imwe neimwe iri kutevedzera zviyero.Panguva imwecheteyo, ivo vachatora mifananidzo uye vokupfura vhidhiyo iwe.
Q3: Ungagadzirisa sei matambudziko ehunhu mushure mekutengesa?
A: Tora mifananidzo yematambudziko uye utumire kwatiri Mushure mekusimbisa matambudziko, mukati memazuva matatu, tichaita mhinduro inogutsa kwauri.
Q4: sei kusimbisa mhando nesu tisati tatanga kuburitsa?
A: 1) Tinogona kupa sampuli uye iwe unogona kusarudza imwe kana kupfuura, uyezve isu tinoita mhando maererano neizvozvo.
2) Titumire yako sampuli, uye isu tichazviita zvinoenderana nehunhu hwako.
Pashure: chando acrylic jira
Zvadaro: anopenya acrylic jira
acrylic jira 2mm
chena opaque acrylic sheet
yakakwirira yakajeka yakajeka acrylic sheet
acrylic girazi jira 4 × 8
ane mukaka chena acrylic sheet
akwariyamu acrylic machira
Runhare: +86 -21 -56561003
Room 1003, Kuvaka 1, Lane 111, Luxiang Road, Baoshan District, SHANGHAI, China
WPC Sintra Plastiki Sheet
Takadzokera kubasa mushure mezororo reCNY
PVC Foam Sheet Musika: Sumo
Tiri pamwe chete